”Halkii baabuur oo badeeco sida waxaa laga qaadaa $502 oo doollar!” – Silac ka daran midkii dowlad la’aanta oo haysta gaadiidleeyda Muqdisho & gobollada | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Halkii baabuur oo badeeco sida waxaa laga qaadaa $502 oo doollar!” –...
”Halkii baabuur oo badeeco sida waxaa laga qaadaa $502 oo doollar!” – Silac ka daran midkii dowlad la’aanta oo haysta gaadiidleeyda Muqdisho & gobollada
(Muqdisho) 04 Luulyo 2021 – Shalay waxaan tagay deegaanka Lafoole. Waxaan gaari caasi ah ka raacay suuqa Daawada ee Bakaaraha. 38 kun ($1.5) ayaan gaariga ku raacay, waxaana jidka ku sii jirnay ku dhowaad 2 saac. Markii iigu dambaysay ee aan Lafoole tagay oo aheyd May 2020 waxaan gaariga ku raacay 9 kun ($0.3), waxaana waddada ku sii jirnay muddo nus saac ku dhow.
Ma taqaan sababta aan u daahnay, lacagtaas badanna la iiga qaaday? Waxaa Ex-Control Afgooye ka xiran waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo dhowaan la dhisay. Gawaarida dadweynaha sida caasiyaasha, baabuurta yar yar iyo bajaajta looma ogola in ay maraan. Sababtaas ayaana ugu leexannahay waddo qardajeex ah oo jaam badan oo laamiga Warshadaha uga leexata dhanka Deyniile, inta aan la gaarin Ex-Control Afgooye.
Waxaan laamiga uga dhacnay inta u dhexeysa xerada Maslax iyo Sarkuusta, askar halkaas fadhiso ayaana gaarigii aan saarnaa ka qaadatay $1. Markii aan sii mareyno Xaawo Cabdi waxaa na istaajiyay askar kale, waxayna gaarigii ka qaateen $4. Soo laabadkii waxaa soo raacay caasi kale, waxaana laga qaaday lacagtii oo kale.
Sii socodkii iyo soo laabadkiiba waxaan jaam ku galnay waddada isku xirta laamiga Warshadaha iyo Soddonka, waa tan ka soo leexata Kulyadda Jaalle Siayad ee ka so dhacdo Warshadda Caanaha. Darawalkii ayaan waydiiyay sababta ay waddadaan mar kasta jaam u tahay, wuxuuna ii sheegay in ay halkaan wada maraan gawaarida ka timaada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Gedo, Baay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, maadaama laamigu ka xiran yahay Ex-Control Afgooye, aysanna ku gudbi karin kan Warshadaha oo ka xiran Gaashaandhigga. Intaas waxaa u sii dheer in labada seed ee laamigaan uu midkood u xiran yahay Kulyadda Jaalle Siyaad.
Dhibka jidkaan lagu qabo waxaa ka sii daran in uu sicirbar sababay oo uu badeecada ku qaaliyeeyay dadka ku noo deegaannada ka dambeeya Ex-Control Afgooye. Waayo, gawaarida xamuulka ah ayaa galabkii loo furaa Ex-Control Afgooye. Halkii gaari waxaa halkan looga qaadaa $196. Markii uu Boodboodka sii marayo waxaa laga qaadaa $92. Kontoroolka Baar-Ismaaciilna waxaa looga qaadaa $214.
Halka baabuur oo badeecada sida waxaa sidaas looga qaadaa $502. Lacagahaas waxay ganacsatadu ku dallacayaan qiimaha badeecada, waxayna ka go’an tahay jeebka dadweynaha sii iibsanaya. Waxaa la mid ah baabuurta Muqdisho khudaarta uga keento Shabeellada Hoose, oo qiimaheedu kor u kacay.
Laamigaas dhibkaas lagu qabo shaqo kama socoto oo waxaa dhismihiisa la dhammeeyay bishii Maarso, shirkaddii iyo shaqaalihii dhisayna waxay hadda ka shaqeeyaan laamiga isku xira Muqdisho iyo Jowhar. Mana garan karo sabab uu u xiran yahay oo ay shacabku silacaas u marayaan haddii aysan shaqo ka soconin, oo aan qorshaxumo iyo damiirxumo ka aheyn.
Raysulwasaare Rooble markii uu furayay waddada isku xirta Tarabbuunka iyo KM4 wuxuu sheegay in uu Muqdisho ku noolaa, oo uu garanayo xanuunka uu leeyahay jid la xiray. Mudane Raysulwasaare, silac iyo saxariir badan oo sicirbararkuna u sii dheer yahay ayay shacabku jidkaas ku qabaan ee fadlan xal u raadi dhibka jidkaas ka taagan.
Oo xitaa haddii aan laamigaas la furi karin [oo lala sugayo jidka Jowhar si hal mar xarigga looga jaro oo loogu galo olole doorasho], fadlan noo fur seedka ka xiran jidka isku xira Warshadda Caanaha iyo Kulyadda Jaalle Siyaad, si ugu yaraan uu jaamku waddadaas uga kala yaraado.
Shalay kaliya oo aan maray ayaan ku silcay ee ka warran dadka deggan Garasbaalley, Tareedisho, Ceelasha Biyaha ilaa Afgooye ee ay maalin kasta marriinka u tahay?!
Waxaa Qoray: Xuseen Sabriye
Previous articleMasar oo ka fikiraysa inay tillaabo millateri ka qaaddo Itoobiy (Somalia oo ay ku tashanayso & caqabadaha hor taagan)
Next articleAskar ka wada tirsan Booliiska Kenya oo isku xabadaysay duleedka Nairobi (Waxa ay isku hayaan oo yaab leh)